बम पड्काइरहेको,धम्क्याइरहेको झुण्डमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथी अर्काे अराजक अभिब्यक्ति दिएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथी प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कडा शब्दमा आलोचना गर्ने गरेका छन् । आइतवार विराटनगर पुगेका ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई झुण्डको संज्ञा दिएका छन् ।
‘विप्लव समुह आधिकारिकरुपमा केही दर्ता छैन, दर्ता नभएको संस्था विधिवत हुँदैन’ ओलीले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग भने ‘यो झुण्ड हो, झुण्डलाई सरकारले चिन्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओली विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक दल नभएको टिप्पनी पनि गरेका छन् । संगठितरुपमा बिध्वंसात्मक गतिविधिमा लागेको झुण्ड भएको बताए ।
विप्लवसँग वार्ता गर्न दलका नेताहरुले दिएको सुझावप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोस पोखेका छन् । ‘नेपालका नेताजीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आफैँलाई जवाफ दिन नसक्ने कुराहरु नगर्नुहोस्, उनको पार्टी कही दर्ता भएको थियो र ? दर्ता छैन। नेकपा विप्लव समूह भनेर चिनिने झुण्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिने जस्तै हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने ।बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ, अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ?’
विप्लव समुहसँग वार्ता गर्न सरकारले यसअघि वार्ता टोली बनाएको स्मरण गरे । तर उनीहरुले नै वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको ओलीले बताए । ‘नेपालमा शान्ति चाहियो कि चाहिएन ? वार्ता समिति बनाएको हो, गर्दिन भनेको होइन ? सुन्न र गर्न सक्ने माग भए पुरा गर्छाै भनेकै थियौ, फेरी बम पड्काउँदै हिड्नु पर्ने ?